Aprimo: Fitaovana goavambe ho an'ny varotra miharo | Martech Zone
Aprimo: Fitaovana goavambe ho an'ny varotra miharo
Alarobia, Novambra 3, 2010 Zoma, Martsa 11, 2016 Douglas Karr
Amin'ity taona ity, mahita fandrosoana mahatalanjona amin'ny interface interface ho an'ny mpivarotra isika. Tamin'ny taon-dasa dia nihaona tamin'ny ekipa mpitarika aho tao Aprimo rehefa avy niresaka tamin'ny Haresh Gangwani, ny VP an'ny tetika momba ny vokatra. Ny orinasa dia nanova fitaovana vaovao ary nanomboka nanolotra lozisialy ho toy ny serivisy "Studio" Service.
Nampahafantarina ahy ihany koa aho ary nihaona tamin'ny tale jeneralin'izy ireo Bill Godfrey lavany. Resaka tsy mampino momba ny Revolution Revolution… ary indrisy fa nanao asa tsy dia ampy aho nandrakitra an'io ka tokony nariako. 🙁 Nahafinaritra ahy koa ny nihaona vaovao CMO Lisa Arthur izay manana traikefa 20 taona ary niasa tamina olona goavambe toa ny Oracle, Akamai ary orinasa teknolojia hafa.
Ny nataoko ambanin-javatra tanteraka dia ilay fitaovana tsy mampino izay novolavolain'i Aprimo an-tserasera ary natolony teo am-pelatanan'ny mpanjifany. Na dia tsy nanova ny fifandraisan'ny mpampiasa aza ireo mpitarika automatisation hafa nandritra ny taona maro - ary mbola mampiasa fitambarana fanaraha-maso mpampiasa, fanoratana sy API ho fananganana doka ara-barotra be pitsiny - nomen'ny Aprimo ny reniny ny traikefan'ny mpampiasa rehetra… tsotra, kanto, ary fandrosoana mandroso sy milatsaka.
Ity misy ohatra iray amin'ny motera famolavolana fizarana misy azy ireo. Fitaovana azo sintomina ao amin'ny interface tsara sy namboarina mora foana. Manome isa isaina aza ny rafitra. Tsy voafetra amin'ny mailaka fotsiny ny fampielezan-kevitra, ny fizotran'ny fizarazarana mandeha ho azy dia afaka mamoaka lisitra fandefasana mailaka mandeha ho azy mba hanomezana fanamelohana henjana sy marobe.
Ireo mpivarotra dia afaka manangana fampielezan-kevitra manjavozavo amin'ny alàlan'ny fitaovana fizotran'ny style flowchart:
Ary rehefa mijery ny mpivarotra hahazoana antoka fa mandeha tsara ny paikadin'izy ireo, ny vahaolana dia manome kalandrie sy fomba fijery Gantt an'ireo fampielezan-kevitra marobe:
Avy amin'ny tranokala Aprimo:
Ny rindrambaiko marketing apetraka amin'ny fangatahana, apetrak'i Aprimo, dia ahafahan'ny mpivarotra B2C sy B2B mivezivezy amin'ny fomba mahomby ny fiovaovan'ny marketing amin'ny alàlan'ny fifehezana ny teti-bola sy ny fandaniam-bola, manala ireo silo anatiny miaraka amina fivezivezena mirindra sy fanatanterahana fampielezan-kevitra marobe ahafahana mitondra ROI azo refesina. Ny sehatray dia azo ampifanarahina amin'ny filàn'ny orinasanao manokana miaraka amin'ireo modules ho an'ny Tetikasa hetsika, ny fitantanana ny harena ara-barotra MRM, ny fitantanana Digital Asset Management, ny EMM Enterprise Marketing Management, ny drafitra ara-barotra, ny fandrindrana ny tetika sy ny tetika, ny fitantanana ny marika, ny fitantanana ny haino aman-jery sosialy, sns.
Visit Aprimotranokala hahazoana fampahalalana fanampiny. Aprimo koa dia namoaka zavatra tsy mampino bilaogy amin'ny marketing refesina.
Tags: aprimobill godfreyhetsika marketingFandaminana hetsikavarotra mitambatra
Fiaraha-miasa an-tserasera amin'ny Facebook? Miloka ianao!
Nahazo tranga tamin'ny alatsinainy… miaraka amin'ny doka?
Dec 18, 2016 amin'ny 10: 25 AM
Salama Douglas lahatsoratra tsara momba ny lohahevitra Marketing integrated.
Ny automatisation dia mitana andraikitra lehibe amin'ny taonjato faha-21. Ny ankamaroan'ny tolotra fitantanana fitarihana sy fitomboan'ny varotra dia ohatra mahazatra amin'izany. Ny varotra mitambatra mifangaro amin'ny automatisation dia manampy amin'ny famaritana ny fitondran-tenan'ny mpampiasa sy ny valiny haingana amin'ny tahan'ny fiovam-po.